Maalinta: Oktoobar 16, 2018
Dawlada Hoose ee Magaalada Caabudwaaq, adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada oo leh basaska dadweynaha iyo kuwa basaska ah, nidaamka lacag ururinta ee caqliga leh mana aysan shaqeynin hanti-dhowr. Gaadiidka dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee Van [More ...]
Aasaaska Tababarka Wadada Taraafikada ee Bilecik
Aasaaska Wadada Tababarka Wadooyinka, oo ay qabandoonto Degmada Bilecik, ayaa loo diyaariyay in lagu baro caruurta sharciyada taraafikada iyo sidoo kale in la siiyo waqti fiican qoyska. Mu'asasada Akasya Altı [More ...]
Ma jirto waqti gaaban gaadiidka dadweynaha ee Trabzon
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Trabzon Orhan Fevzi Gumrukcuoglu, markii uu lahadlayay muwaadiniintiisa kale ee Trabzon, qarashka cabitaanka biyaha iyo gaadiidka dadweynaha ayaan dib u sheegi doonin. 15 Luulyo Martyrs iyo Hürriyet Square [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın10-13 Oktoobar 2018, dhismaha wadada Eskişehir-İstanbul YHT wuxuu kusii soconayaa T-26 tunnel iyo Doğançay Ripage inta udhaxeysa Sakanca iyo Sapanca-Geyve. [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınKaqeybqaadashada Shirweynaha Wershadaha Gudaha iyo Teknolojiyadda Mimar oo ay soo qabanqaabisay Mimar Sinan Union of Engineers-ka magaalada Bursa maalinta 14 October 2018 Sunday. [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa yiri, sayım Tirada isticmaaleysa e-dowladdu waxay gaartay 40 milyan, tirada hay'adaha 473 iyo tirada adeegyada 3 kun 864. Dhammaan adeegyada guud, dawladda illaa dhammaadka 2018 [More ...]
Ardayda KYK ayaa booqday TÜDEMSAŞ
Ardayga 15 ee ku sugnaa Machadka Daraasaadka Deymaha (KYK) oo wax ku bartay qeybaha farsamada ee Jaamacadda Cumhuriyet wuxuu booqday goobaha wax soo saarka ee TÜDEMSAŞ. Ardayda safarka kahor, TÜDEMSAŞ Maareeye Kuxigeenka Guud Mehmet Başoğlu ayaa wada sheekaystay muddo [More ...]
Africa II - Dhismaha Xarunta, on October 10, caleema saarka Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan, Turkey qabtay. Wuxuu kaqeybqaatay Madasha Dhaqaalaha iyo Ganacsiga isagoo kafaala-qaadey. Forum, "dhismaha dhexeeya Turkey iyo Africa, kaabayaasha [More ...]
Turkey, taas oo la keeni doonaa xarunta logistics dunida, Airport New Istanbul laga furi doonaa xaflad grand in la qabto on October 29, 2018. Xamuulka Turkiga, illaa iyo Diseembar 31, 2018, dhammaan howlaha xamuulka ayaa isku mid ah [More ...]
Gebze-Halkalı Taariikhihii Bakirkoy iyo Yesilkoy ee ku yaal khadka magaalada ayaa la keydiyey oo la dhigay meelahooda cusub. Xarunta Bakirkoy, oo u adeegaysay dadka deggan Istanbul wax ka badan 100 sano, ayaa lagu dayactirey laba dhisme. Dhismooyinka, dib u soo celinta [More ...]
Duqa magaalada Şanlıurfa Nihat Çiftçi ayaa furay dhismaha adeegga kaas oo ay soo gabagabeeyeen Agaasimaha Guud ee Dawladda Hoose ee BELSAN. Dhismaha Gaadiidka ay dhistay Dawladda Hoose ee Sanliurfa, Dhismaha adeegga 3 kun oo mitir oo laba jibaaran [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada, miisaaniyaddii ugu weyneyd ee taariikhda ilaha ay leedahay in lagu qabto qandaraaska 20 Khamiista Oktoobar 11.00'de Hall Hall Hall ayaa sidoo kale fulisa ... In kasta oo ay jiraan tallaabooyinka ay qaadeen Madaxweynaha iyo dowladda dhexe [More ...]
Akadeemiyada Kubadda Cagta ee Oğuz Arda Flood, oo ay ka diiwaan gashan tahay degmada Uzunköprü ee loo yaqaan '258', ayaa laga furay Degmooyinka Bulshada ee Degmooyinka Cusunköprü. Horumarinta aqoonta kubada cagta iyo xirfadaha ardayda da'da 7-14 ee wax ka barata degmadeena waa xun [More ...]